Ahoana ny fametrahana iOS 13 na iPadOS amin'ny iPhone na iPad | Vaovao momba ny gadget
Ignacio Sala | | Finday, takela-bato
Isaky ny Apple, na orinasa hafa dia mamoaka kinova vaovao na fanavaozana ny rafitry ny fandidiana azy, tsara ny miandry iray andro hahazoana antoka fa tsy ahitana olana ara-piasana izay mety mahazo mampandeha ny fitaovantsika. Fa izany no ilana ny beta.
Rehefa afaka volana maromaro nanaovana beta, ny orinasa Cupertino dia namoaka ny kinova, ary noho izany marin-toerana, an'ny iOS 13, kinova vaovao an'ny iOS izay manome toerana ambony kokoa amin'ny iPad. Raha ny marina, ny kinova iPad dia nantsoina hoe iPadOS. Atorinay anao izao ny fomba fametrahana iOS 13 / iPadOS amin'ny iPhone na iPad-nao.
Inona no vaovao ao amin'ny iOS 13
Alohan'ny hanavaozana ny fitaovantsika dia tsy maintsy zahao na ny iPhone na ny iPad dia mifanentana miaraka amin'ity kinova iOS vaovao ity. Nampifantoka ny ezaka rehetra nataony tamin'ny iOS 12 i Apple tamin'ny fanatsarana ny zava-bitany, zavatra izay nahombiazany tamim-pahombiazana, na dia tamin'ny fitaovana taloha aza, izay famantarana fa tsy hifanaraka amin'ireo terminal mitovy amin'ny iOS 13 ny iOS 12.
1 Fitaovana mifanaraka amin'ny iOS 13
1.1 iPhone mifanaraka amin'ny iOS 13
1.2 iPad mifanentana amin'ny iOS 13
1.3 iPhone sy iPad tsy mifanaraka amin'ny iOS 13
2 Ahoana ny fametrahana ny iOS 13
2.1 Backup miaraka amin'ny iTunes
2.2 Famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny iCloud
3 Fanavaozana ny iOS 13
3.1 Fanavaozana ny iOS 13 avy amin'ny iPhone na iPad
3.2 Fanavaozana ny iOS 13 avy amin'ny iTunes
iOS 13 dia mifanaraka amin'ireo terminal rehetra izay tantanan'ny RAM 2 na mihoatra GB. Amin'izany fomba izany, raha manana iPhone 6s mandroso na iPad Air taranaka faharoa ianao manararaotra manavao ny iOS 13 ianao.
Raha toa ka manana iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air na iPad mini 2 sy 3 ianao, dia tsy maintsy milamina amin'ny fijanonana amin'ny iOS 12, kinova izay manolotra fampisehoana izay tadiavin'ny maro ao amin'ny kinova iOS an'ny fitaovany izay nijanona tsy nahazo fanavaozana taloha ela be.
iPhone mifanaraka amin'ny iOS 13
iPhone 11 (alefa amin'ny iOS 13 ny orinasa)
iPhone 11 Pro (alefa amin'ny iOS 13 ny orinasa)
iPhone 11 Pro Max (tonga avy any amin'ny orinasa miaraka amin'ny iOS 13 izy ireo)
iPad mifanentana amin'ny iOS 13
iPad Pro 12,9-inch (modely rehetra)
iPhone sy iPad tsy mifanaraka amin'ny iOS 13
iPad Air (taranaka XNUMX)
Ahoana ny fametrahana ny iOS 13
Rehefa afaka herintaona miaraka amin'ny iOS 12, ny fitaovantsika dia feno rakitra junk izay namokatra ny rindranasa napetraka tao amin'ny fitaovantsika, ka fotoana mety hanadiovana ny vata. Izany hoe, tsy maintsy miroso amin'ny famafana ny fitaovantsika rehetra isika mba hametrahana fametrahana madio, hatrany am-boalohany, tsy hisintona ny zava-bita na ireo olana eo amin'ny habakabaka izay mety hijaly ny fitaovantsika.
Raha tsy manao izany isika dia azo inoana fa ny fitaovantsika dia mety tsy mandeha amin'ny fahafaham-posatria misy fiatraikany amin'ny korontana anaty amin'ny endrika fampiharana / fisie izay tsy ampiasaina fa mbola eo amin'ny fitaovana.
Raha toa ka manamboatra fametrahana madio an'ny iOS 13 isika ary mamerina mamerina backup, hahita olana mitovy amin'izany isika fa raha manavao mivantana ny fitaovantsika amin'ny iOS 12 ka hatramin'ny iOS 13 isika nefa tsy mamafa ny atiny rehetra.
Backup miaraka amin'ny iTunes
Raha mbola te-hanavao ny iOS 13 avy amin'ny iOS 12 ianao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny manaova backup. Ny fametrahana kinovan'ny rafitra fiasa amin'ny kinova taloha dia mety hiteraka tsy fahatomombanana izay manery anay hamerina ny fitaovanay.
Raha izany no izy, ary tsy manana backup isika, dia ho very avokoa ny fampahalalana izay notehirizinay tao amin'ny terminal anay. Mba hisorohana an'io karazana olana io, alohan'ny fanavaozana ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa, amin'ity tranga ity ny iOS 13 dia tsy maintsy atao izany manaova kopia voafafa amin'ny fitaovantsika amin'ny iTunes.
Raha te hanao backup amin'ny alàlan'ny iTunes dia mila mampifandray ny iPad na ny iPhone amin'ny solosaina fotsiny isika, manokatra iTunes ary tsindrio ny kisary izay maneho ny fitaovantsika. Ao amin'ny varavarankely izay haseho, dia tsy maintsy tsindrio ny Backup. Ny fizotrany mila fotoana bebe kokoa na latsaky ny habaka nozanahinay izany amin'ny fitaovantsika ka tokony ho moramora izany.
Famerenana amin'ny laoniny miaraka amin'ny iCloud
Raha manana drafitra fitehirizana iCloud izahay dia ao anaty rahona ny sarinay rehetra, ary koa ny antontan-taratasy rehetra izay mifanaraka amin'ny serivisy fitehirizan'ny rahona an'ny Apple. Izahay ity hialanao ny fanaovana backup Avy amin'ny terminal anay satria voatahiry soa aman-tsara ny fampahalalana rehetra momba azy. Vantany vao nohavaozina ny terminal dia tsy maintsy ampidirintsika indray ireo rindranasa napetraka.
Raha mila tazomy ireo rindranasa mitovy amin'ny anay tamin'ny iOS 12, ka hisintona ireo olana rehetra nohazavaiko tetsy ambony, dia afaka manao kopian'ny backup ao amin'ny iCloud izahay, ka raha vao nohavaozina izy io dia azontsika atao ny mamerina ny rindranasa rehetra napetraka.
Fanavaozana ny iOS 13
Rehefa avy nahavita ny dingana rehetra izay nohazavaiko etsy ambony, ny fotoana irina havaozina amin'ny iOS 13. Afaka manao an'ity dingana ity amin'ny iPhone na iPad na mivantana amin'ny iTunes isika. Raha manao izany amin'ny iPhone na iPad isika dia tsy maintsy manatanteraka ireto dingana manaraka ireto:
Fanavaozana ny iOS 13 avy amin'ny iPhone na iPad
Fanavaozana ny lozisialy.
Ao anatin'ny fanavaozana ny lozisialy dia haseho fa manana kinova vaovao an'ny iOS hapetraka isika, indrindra ny iOS 13. Rehefa manindry azy, ny antsipirihany amin'ity kinova vaovao ity.
Mba hanohizana ny fametrahana dia tsy maintsy tsindrio isika Sintomy sy apetraka.
Mba hisian'ny fanavaozana dia tsy maintsy atao ny terminal mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi sy charger. Ny batterie terminal dia tokony mihoatra ny 20% hanombohana ny fizotry ny fametrahana.
Fanavaozana ny iOS 13 avy amin'ny iTunes
Raha kilasika ianao ary te hanohy manavao ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny iTunes, ireto ny dingana manaraka.
Voalohany indrindra dia mila isika mampifandray ny iPhone na iPad amin'ny solosaina.
Manokatra iTunes izahay ary tsindrio eo amboniny kisary maneho ny fitaovana te-hanavao izahay.
Eo ankavanana ambony, misy ny fampisehoana ny terminal, tsindrio Zahao ny fanavaozana.
Raha vao manaiky ny fepetra isika dia hanomboka ny iTunes fampidinana fampidinana ary manavao ilay fitaovana avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ahoana ny fametrahana iOS 13 na iPadOS amin'ny iPhone na iPad anao
Portal, ilay mpandahateny fakantsary Facebook, misy any Espana izao